Ihe ọhụrụ crypto-hamster dị njikere imechi ụlọ akụ - CoinWorldMap
New crypto hamster dị njikere imechi ụlọ akụ
Mee 10, 2022 Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Nft, Solana
Goxx Capital ekwuputala onye ga-anọchi anya Mr. Goxx nwụrụ anwụ, hamster trading crypto nke mere akụkọ akụkọ gburugburu ụwa. Ihe ọhụrụ crypto hamster na-arụsi ọrụ ike na ala azụmaahịa ma nwee nnukwu ite ka ukwuu iji gwuo egwu.
Julaị gara aga, Protos malitere iso akụkọ nke hamster mbụ nke ụwa nwere obere akpa cryptocurrency. Ka ọ na-erule Septemba, nyocha data gosiri na Mr. Gox ama karịa Bitcoin, Warren Buffett's Berkshire Hathaway, Cathy Wood's Ark Invest, na S & P 500. Hamster na-ere obere cryptocurrencies ya na nnukwu teknụzụ ya.
Mkpesa sochirinụ kpalitere Maazị Goxx na ụlọ ọrụ Goxx Capital ya ka a ma ama n'ụwa niile, yana akwụkwọ ndị dịka BBC, NPR na Fortune na-akọ maka ọganiihu hamster ahụ. N’ihi ya, ọtụtụ puku mmadụ malitere ikiri mgbasa ozi ya kwa abalị na Twitch, bụ́ nke chịkọbara ihe karịrị ndị debanyere aha 15.
Otú ọ dị, ọnwa abụọ ka e mesịrị, ndị mmekọ azụmahịa nke Mr. Gox kwupụtara ọnwụ mberede ya. Ego mkpuchi mkpuchi crypto-hamster kwụsịrị azụmaahịa wee were oge ezumike ọnwa isii.
Ugbu a, ọrụ crypto-hamster alaghachila ma buru ibu karịa mgbe ọ bụla. Kemgbe Fraịde, onye na-ere ahịa mustachioed ọhụrụ a maara dị ka Mr. Gox Jr. amalitela ịme egwuregwu crypto na oghere ọhụrụ na nkwalite.
“Mgbe ọrụ ahụ kwụsịrị n'ụzọ dị egwu n'afọ gara aga, anyị chọrọ oge iji dozie nsogbu ahụ. Kemgbe ahụ, anyị enweela mkparịta ụka siri ike gbasara ma anyị chọrọ ịmalitegharị ọrụ ahụ ma ọ bụ na anyị achọghị, "Onye nọ n'azụ ọrụ Goxx Capital kwuru. “O doro m anya na achọrọ m inwe enyi iwe ọzọ ná ndụ m. N'ihi ihe nketa anyị hapụrụ, anyị nwere ego iji wuchaa ụlọ hamster nke nrọ anyị, nke anyị malitelarị iwu.
Akwa tech cell enwetara ego Nft
N'October 2021, ndị otu nọ n'azụ ọrụ a weputara mkpokọta na OpenSea Nft na nsụgharị dijitalụ nke kaadị azụmaahịa na-egosi oge sitere na ọrụ Mr. Gox. Ire nke 19 NFT mepụtara 3 ETH ($ 7), na-enyere aka melite arụmọrụ nke isi ụlọ ọrụ Goxx Capital. Ekwesiri ighota na otutu ahia ahia mere na October nke afo gara aga, mgbe 300 ETH ruru ihe kariri $ 1.
Isi ụlọ ọrụ emezigharịrị ugbu a dị okpukpu atọ ma gụnye ala azụmaahịa nwere “wheel ebumnuche” maka ịhọrọ cryptocurrencies na “ọwara mkpebi” maka ime ihe ịzụrụ ma ọ bụ ire ere.
Goxx Capital kwapụrụ n'ala azụmaahịa ya nwere otu akụkọ
N'isi ụlọ ọrụ ọhụrụ nke Goxx Capital:
Ime ụlọ ise dị iche iche, mpaghara ya bụ 1,25 m².
Igwefoto nkọwa dị elu etinyere na usoro njikwa ngagharị emebere nke na-ebuli elu na ala ọkwa atọ na-eso hamster.
Ụlọ ejiji, ebe ọ nwere ike ịhọrọ "ịgbanwe", oge ọ bụla ọ na-amịpụta igbe ahụ, uwe kwekọrọ na ya ga-apụta na ihuenyo (enwere ike ịzụta ya na NFT Avatar Pack na ala. Solana).
Ihe mgbakwunye ọhụrụ ọzọ bụ ụlọ njikwa, nke nwere ihe ngosi eletrọnịkị nke na-egosiputa ajụjụ ndị na-ekiri. Njikwa dịpụrụ adịpụ anọ na-enye ohere ka Maazị Gox Jr. zaa ajụjụ ozugbo wee " kesaa amamihe ya site na nkata."
Mazị Gox Jr na-enye echiche ya banyere ịzụrụ Elon Musk nke Twitter.
Na nsụgharị ya gara aga, ndị nọ n'azụ Mr. Gox mere ike ha niile iji mee ka onye ọ bụla ghara iṅomi azụmahịa cryptocurrency nke hamster mere. Nkwuputa a abanyela na ụdị 2.0, na n'agbanyeghị mmeghe nke Q&A ọhụrụ, ndị na-akwado Gox agaghị enwe ike ịnweta ndụmọdụ gbasara ego n'aka òké.
"N'ime ụlọ njikwa, anyị emepụtala ngwanrọ nchịkwa omenala ebe anyị na-eji aka nyochaa na ajụjụ ndị ahụ kwekọrọ na ụkpụrụ ọdịnaya anyị. Ajụjụ ndị nwere ike ime ka ndị mmadụ nọrọ ná nsogbu, "onye na-ekwuchitere Goxx Capital kwuru.
Crypto hamster counters bear ahịa
Dị ka Goxx Capital si kwuo, dike ọhụrụ ahụ bụ onye na-arụsi ọrụ ike ma na-achọsi ike Roborovsky dwarf hamster, nke ụdị ahịa ya dị iche na nke onye bu ya ụzọ.
Mazị Gox Jr na-arụsi ọrụ ike na ala azụmaahịa ma nwee nnukwu ite ka ya na ya ga-egwu egwu. Ntụle mmalite ya karịrị € 1000. Agbanyeghị, Gox Jr. bụ na-acha uhie uhie mgbe naanị ụbọchị anọ nke azụmahịa ya.
N'oge a, o mere 78 ịzụta iwu na 29 na-ere iwu; onye bu ya ụzọ mere naanị azụmaahịa 215 na ọrụ ya niile dị ebube. Ugbu a Mr Gox Jr na-alụso ahịa anụ ọhịa ọgụ na Pọtụfoliyo ya gbadara ihe karịrị 3% ruo € 1051,61.
Atọ n'ime nnukwu akụ ya na hodl bụ: Dogecoin (DOGE) dị ihe dị ka $80, Tron (TRX) ruru ihe dị ka $63 (Mazi Gox mbụ bụkwa onye na-ele mmadụ anya n'ihu na Tron), yana Aave (AAVE) ruru ihe dịka $62.
Co: Mepụta ga-enyere aka NFT oru ngo na tokens
Binance kwụsịtụrụ LUNA na UST ndọrọ ego